A na -ejikwa ahịrị extrusion nke ihe mejupụtara plastik osisi niile site na mmemme Siemens PLC. Agụụ jụrụ calibrating ikpe onwem na agụụ mgbapụta na ekesa mmiri ịzọpụta ike jụrụ usoro. Edebere ikpe ahụ na ngwa na -agbagharị agbago na elu, aka ekpe na aka nri, n'ihu na azu, yana ịhazigharị ngwaọrụ ụta. Ngwa mmiri na -eku ume nwere ike ihicha ngwaahịa ma chebe caterpillars nke traktọ site na nchara. Enwere ike ịhọrọ ikpe ahụ ogologo 4M, 6M, 8M ma ọ bụ 10M dị ka ihe achọrọ maka ngalaba ngwaahịa.
Agụụ jụrụ calibrating ikpe onwem na agụụ mgbapụta na ekesa mmiri ịzọpụta ike jụrụ usoro. Edebere ikpe ahụ site na iji ihe na -agbanwegharị elu na ala, aka ekpe na aka nri. Ngwa mmiri na -eku ume nwere ike ihicha ngwaahịa ma chebe caterpillars nke traktọ site na nchara.
PVC profaịlụ plastik, ahịrị mmepụta ihe
Njirimara na arụmọrụ: The extrusion akara mejupụtara conical ejima kposara extruder, agụụ jụrụ calibrating ikpe, katapila ụdị traktọ, ịcha unit. Stacking shelf.
Ngwa a nwere ike ọ bụghị naanị na -emepụta granules TPR, ihe mkpuchi eriri USB, granul PVC transperent, onye nnabata extrusion nwekwara ike mepụta ọkpọkọ plastik, profaịlụ plastik, mpempe akwụkwọ plastik na ụfọdụ ngwaahịa plastik polyolefin, ngwa ngwa. Na -anakwere ụdị cone okpukpu abụọ, atụmatụ njikarịcha ụda na -agbanwe agbanwe, usoro ọsọ ọsọ ntụgharị, ọnọdụ okpomọkụ na -akpaghị aka mgbe niile, bụ ngwaahịa teknụzụ ọhụrụ dị ugbu a, ọ ga -ewetara gị uru akụ na ụba kacha mma maka itinye ego kacha ala.
Mpempe akwụkwọ nhazi yana ntinye nke igwe igwe ihe 500
Ọnụ ego niile bụ ụtụ isi 29000 yuan
Ngwaahịa anyị bụ igwe na -egweri plastik PVC, dị ka ụkpụrụ nke mkpụrụ dị elu si dị, ịdị mma dị mma.
Ọnụ ego igwe igwe kilowatt 55 bụ 43,000RMB, igwe nri kilowatt 75 bụ 56,000RMB, igwe igwe kilowatt 90 bụ 59,000 RMB (ụtụ ụtụ niile gụnyere)
Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Na -akụpịa igwe ihe, Nweta Wpc, Onye Wpc Extruder,